Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile iyo Xubno kale oo Tacsi Tiiraanyo leh u Diray laba Marxuum oo Sheekh Lagu Aasay...
Wednesday March 07, 2018 - 02:50:56 in Maqaallo by Super Admin
Inaalilahi waa Ina Ileyhi raajicuun.
Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile. Saleeban Xasan Cabdi (Indho) iyo Maxamed Cabdi Diiriye Xayd. Waxay Tacsi tiiraanyo badan u dirayaan labada Marxuum ee lagu kala Magacaabi jiray Marxuum Axmed Xaaji cabdilahi xarbi oo ku macag dhera (Axmed yare) iyo Marxuum Mustafe xuseen maxamed ku magac dhera (mustafe dhagawel). Labada marxuum oo shalay lagu Aasay Magaalada Sheekh, waxay Ilahay uga baryeen inuu jana Fardawso ka Waraabiyo, qabriga u waasiciyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeena Samir iyo iimanka siiyo aamin...Aamin... Aamin. Inaalilahi waa Ina Ileyhi raajicuun.